काठमाडौं हिँडेकी उपमेयर अमेरिकामा पुगेपछि फर्किनन्, नगरपालिकाको कामकाज प्रभावित ! – AB Sansar
काठमाडौं हिँडेकी उपमेयर अमेरिकामा पुगेपछि फर्किनन्, नगरपालिकाको कामकाज प्रभावित !
November 28, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on काठमाडौं हिँडेकी उपमेयर अमेरिकामा पुगेपछि फर्किनन्, नगरपालिकाको कामकाज प्रभावित !
‘असोजमा काम विशेषले काठमाडौं जानुपर्ने भयो भनेर मलाई जानकारी दिनुभएको थियो,’ प्रमुख शाहीले भने, ‘अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु । आधिकारिक जानकारी छैन ।’ नगरपालिकामा उपप्रमुख नहुँदा अहिले दैनिक काममा असर परेको प्रमुख शाहीले जानकारी दिए । ‘जनताका काम दैनिक गर्नुपर्छ । उहाँ केही समितिको प्रमुख हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘उपप्रमुख नहुँदा समितिका कामहरू पनि प्रभावित भएका छन् ।’
अष्ट्रेलियासँगको खेलमा युवा खेलाडीले डेब्यू गर्न सक्छन् : प्रशिक्षक अलमुताइरी